Wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho oo dib u furmay manta – idalenews.com
Wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho oo dib u furmay manta
Wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa dib loo furay kadib markii uu baaqday kulankii baarlamaanka ee lagu waday saaka inuu ka dhaco magaalada Muqdisho.
Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka ayaa xalay saq dhexe xiray wadooyinka Magaalada Muqdisho, maadaama la filayay in maanta uu dhaco kulanka Baarlamaanka oo codka kalsoonida loogu qaadi lahaa Gudoomiye Jawaari, balse inta uusan kulankaasi uu san furmin ay soo baxeen warar sheegaya inuu is casilay guddoomiyaha baarlamaanka.
Wadooyinka ayaa laga qaaday ciidamadii ku sugnaa, waxaana hada dib u soo laabtay isu socodka gaadiidka dadweynaha oo maalmihii dambe la kulmayay culeys ku aadan wadooyinka oo si joogto ah loo xirayay.
Wadooyinka xiran ma saameyn oo kaliya dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho hase yeeshee wadooyinka ka soo gala gobolada ayaa iyagana la xirayay mar walba iyadoo ay ku xayirnaayeen boqolaal gaadiid ah oo u soo waday ganacsi kala gedisan caasimada dalka ee Muqdisho.
Mr.Putin Madaxweynaha Rushka oo Israa’iil ku eedeeyay in diyaaradaheeda dagaalka ay weerareen Suuriya
Xildhibaanada Garabka sida weyn u taageersanaa Jawaari oo saaka kala firdhay….